Archive du 20170620
Soanierana Ivongo Nifamono ny sekta sy ny mponina
Nisavorovoro ny tany Soanierana Ivongo omaly alatsinainy 19 jona.
Olom-pirenena ankehitriny Te hampandini-tena mpitondra, hoy ny VAMI
Te hampandini-tena ny mpitondra ankehitriny ireo olom-pirenena tsy manangan-tsaina, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko VAMI (VAhoaka MIray),
Antoko TIM Manentana ireo mpikambana ifotony
Mihetsiketsika fatratra ny sampana antoko TIM manerana ny nosy amin’ny fanentanana ny mpikambana ao aminy ankehitriny.
Governemanta Mikaon-doha any Toliara
Tonga tao Toliara ny tolakandron’ny alatsinainy 19 jona 2017 ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta hanatrika ny filankevitry ny minisitra mitety faritra andiany fahatelo izay tarihin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatao rahampitso alarobia 21 jona.
Taratasin’i Jean Mampijaly zaza
Miarahaba ry Jean a ! Dia ho tahaka izao foana ve ny fiainanao sy itondranao ity revy ity ? Fa maninona raha tonga dia omena an’io zaza io izay tena ilainy fa tsy tapi-maso sy tampim-bava lava izao ?
Fitondran-dRajaonarimampianina Tambazan’ny Sinoa amin’ny vary
Noraisina tany amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina omaly alatsinainy 19 jona ny vary milanja 3100 taonina avy amin’ny governemanta sinoa, izay tonga indroa miantoana ny herinandro teo.
Hotsaraina anio Ramaroson Hafahana sa halentika ?
Hiverina hiakatra fitsarana anio 20 jona i Alain Ramaroson rehefa nandamoka ny raharaham-pitsarana azy ny 6 jona lasa teo.
FLM Ambano –Antsirabe II Misedra olana tanteraka
Misedra olana ny fiangonana Loterana ao amin’ny Synodam-paritany Avaratr’i Mania ary raikitra ny fitokonana.
Antoko mpihira Taratry ny Mazava Hanatanteraka seho ao amin’ny FJKM Anjohy
Taorian’ilay fampisehoana goavana nanamarihan’ny antoko mpihira Taratry ny Mazava eo anivon’ny fiangonana FJKM Ambohidanerana ny voka-dehibe tetsy amin’ny Sainte Famille Mahamasina farany teo dia fantatra fa hanatontosa fampisehoana ao amin’ny FJKM Anjohy indray izy ireo ny 02 jolay ho avy izao.
Lasa anjely tampoka !
Manadio tena fatratra manoloana ny tsy fahafehezana ny firenena sy ny famotehana natao ny fanjakana Rajaonarimampianina.
400 000 Ar ny saram-pisoratana anarana Nigrevy ny mpianatry ny ENS
Nitokona ny mpianatra teny amin’ny ENS (Ecole Normale Supérieure) Ampefiloha omaly, ka raikitra ny fanakanan-dalana sy fandorana kodiarana teny an-toerana.
Rija Rasolondraibe sy ny Mission SOS Hanafana eny Alarobia mandritra ny 4 andro
« Famantarana sy fahagagana » no lohatenin’ny hetsika iarahan’ireo misionera miisa 300 avy amina firenena 25 sy ireo mpihira ara-pilazantsara vitsivitsy toa an-dry Rija